October | 2014 | Burma Muslim
By burmamuslim on October 24, 2014 | Leaveacomment
– အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ဟဂ်ျဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွက် ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စုစုပေါင်း ၂၄.၈ သန်းအား ဟဂ်ျပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထို ၁၀ တာကာလ၌ တစ်နှစ်အတွင်း ဟဂ်ျပြုသူအရေအတွက် အများဆုံးနှစ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပြီး ၃.၁၆ သန်းရှိကာ၊ အနည်းဆုံးနှစ်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဖြစ်ကာ ၁.၉၈ သန်းရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဟဂ်ျပြုသူအရေအတွက် လျော့ကျရခြင်းမှာ မက္ကာနှင့် မဒီနာတို့တွင် အဆောက်အဦး တိုးချဲ့မှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားမှ ဟဂ်ျပြုသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပြည်တွင်းမှ ဟဂ်ျပြုသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆော်ဒီအစိုးရက လျှော့ချခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင် ဟဂ်ျပြုသူဦးရေမှာ ၂.၁ သန်းခန့်ရှိပြီး အမျိုးသား ၁.၃ သန်းခန့်နှင့် အမျိုးသမီး ၈၄၃၀၀၀ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ယခုနှစ် ဟဂ်ျပြုသူဦးရေတွင် အင်ဒီုနီးရှားနိုင်ငံက ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ပါကစ္စတန်က ဒုတိယနှင့် အိန္ဒိယတို့က တတိယနေရာတွင် ရှိကြသည်။
ဆော်ဒီအစိုးရကမူ ဟဂ်ျကျင့်စဉ်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေးအတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်းထောင်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် သုံးစွဲကာ အဆင့်မြှင်တင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရားဝင်အချက်အလက်များအရ ဟဂ်ျပြုသူ ဦးရေမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင် အနည်းငယ် လျော့ကျခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန် တိုးတက်လာခဲ့သည်။
၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ဟဂ်ျပြုသူ နိုင်ငံခြားသား ၆၀၀၀၀ သာရှိခဲ့ရာမှ ဆော်ဒီအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ တိုးတက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားမှ ဟဂ်ျပြုရန် လာရောက်ကြသူများမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာခဲ့သည်။
ref_ Saudi Gazette
အစ္စလာမ် သာသနာ အတွင်းမှ မတူခြားနား ကွဲပြားမှုများ
By burmamuslim on October 23, 2014 | Leaveacomment
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်ဟာ HBO က Bill Maher ရဲ့ တီဗွီတင်ဆက်ပွဲဆိုင်ရာအုပ်စုထဲ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာကိုယ်တိုင်က ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်လာစေတာ ဟုတ်မဟုတ် အငြင်းအခုံ အချေအတင် ဖြစ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုက အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စကားဝိုင်းအဆင့်အထိဖြစ်သွားခဲ့ပြီး အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်အထိ ကူးစက်ရောက်ရှိသွားတယ်။ Maher နဲ့ ဧည့်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်သူ Sam Harris တို့က အစ္စလာမ်ဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့သာသနာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ ကွဲလွဲမှုကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ် သရုပ်ဆောင် Ben Affleck က သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်ဟာ အခြေအမြစ်မဲ့ပြီး လူမျိုးရေးဆန်လွန်းတယ်လို့ ရှုတ်ချခဲ့တယ်။ Ben Affleck ဖက်မှာ ကျွန်တော် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
ပြပွဲပြီးတဲ့နောက် ဒီအစီအစဉ်ထဲပါဝင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကင်မရာနောက်ကွယ်မှာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်တစ်နာရီကြာတဲ့အထိ အချေအတင် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Maher က ဒီအငြင်းအခုံဖြစ်လာအောင် မီးမွှေးခဲ့ပြီ။ ရှေ့ဆက် ဂယက်ရိုက်လာပါတော့မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သံတူကြောင်းကွဲအချက်သုံးခုကို အသိပေးတင်ပြပါရစေ။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ – သမိုင်းကြောင်းအရ အစ္စလာမ်ဟာ (သူတို့ထင်မြင်နေသလို) သဘောထားသေးသိမ်မှု မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို စဦးမြှင့်တင် ပေးခဲ့တဲ့ သာသနာဖြစ်နေတယ်။ ၂၀ ရာစုနှစ်သမိုင်းတွေလောက်လာ ကြည့်ရှုသုံးသပ်သူမည်သူမဆို အစ္စလာမ်သာသနာကို သွေးဆာနေတဲ့သာသနာအဖြစ် အပေါ်ယံရှပ်ပြီးတွေး မိပါလိမ့် မယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဥရောပက ခရစ်ယာန်၊ နာဇီ၊ ကွန်မြူနစ်တွေ၊ အာရှတိုက်က ဗုဒ္ဓ၊ တာအို(တောက်)၊ ဟိန္ဒူနဲ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေရဲ့ တအုံတကျင်း သတ်ဖြတ် မှုများကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
အလားတူစွာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ (အကြမ်းဖက်မှုလို့ မဆင်မခြင်သမုတ်ကြတဲ့) စာပိုဒ်များပါဝင်တာ အမှန်ပါ။ သို့သော် ခရစ်ယာန်များရဲ့ Bible ကျမ်းဂန်မှာလည်း ပါဝင်နေတာ၊ ထာဝရဘုရားရှင်က မျိုးဖြုတ်ရှင်းလင်းဖို့ အမိန့်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ်ခြင်းတစ်မျိုးလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ – ယနေ့အစ္စလာမ့်လောကမှာ အနည်းနဲ့အများ သဘောထားသေးသိမ်ချက်၊ ဖိနှိပ်ချက် ဆိုတဲ့ အစွန်းအထင်းတစ်ရပ် အမှန်တကယ်ကို ရှိနေပါတယ်။ IS က လူရမ်းကားတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့အမူအကျင့်တွေကို သာသနာ့အယူဝါဒလို့ အကြောင်းပြလိုက်ကြတယ်။ သိပ်မကြာသေးခင်က ဗြိတိသျှ ကူညီရေးလုပ်သား တစ်ဦး ကို ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေရဲ့ဘ၀တွေကို ကယ်တင်ဖို့လို့ ဆိုပြီး အစ္စလာမ်ကို အမည်ပျက်စေခဲ့တယ်။ ထပ်ပြီးပြောရရင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်အစီရင်ခံစာမှာ အဆင့် အနိမ့်ဆုံး ၁၀ နိုင်ငံစာရင်းအနက် ၉ နိုင်ငံဟာ မွတ်စ်လင်မ်လူများစုတိုင်းပြည်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ Pew ရဲ့စစ်တမ်းမှာလည်း အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီဂျစ်၊ ဂျော်ဒန်က သုံးပုံတစ်ပုံအထက် မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ သေဒဏ်ပေးခြင်းကို ပိုမိုလက်ခံကြတယ်လို့ ဖော်ပြတယ်။
ခရစ်ယာန်၊ အဟ်မဒီ၊ ယဇီဒီ၊ ဘဟာအီနဲ့ ရှီအိုက်(ရှီအဟ်)တွေရဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်း ဆက်ဆံပြုမူပုံတွေကိုလည်း အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာထဲမှာ တွေ့နေတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ အသံထုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ – အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေ အင်မတန်များပြားတယ်၊ အသွင်မတူမှုနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေ ကြီးမားတယ်။ အာဖဂန်နိုင်ငံသား ၅ ဦးမှာ ၄ ဦးက အယူဝါဒဖောက်ပြန်မှု အတွက် သေဒဏ်ပေးခြင်းကို နှစ်သက်ကြတယ်။ ကမ္ဘာ့မွတ်စ်လင်မ် လူဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက မွတ်စ်လင်မ်တွေအနက် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် အဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို လက်ခံကြတယ်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ ကာဇက်စတာန်မှာဆိုရင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာသာပဲ ဒီစနစ်ကို လက်ခံတာတွေ့ရတယ်။ ဒါလည်း Pew ရဲ့ စစ်တမ်းဖော်ပြချက်ပါပဲ။
အဓိက ကွာခြား ကွဲပြားနေမှုက ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာမဆို သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ တဇောက်ကန်းတွေရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင် ရှင်သန်တဲ့ ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်
ဘယ်ဘာသာ တရားမှာမဆို အချို့သူတွေဟာ လူမျိုးရေးကို ဘာသာရေးနဲ့ တန်းညှိပစ်တဲ့ ဖန်တီးချက်များရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုရပါမယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ထဲမှာ ဂန္ဒီလို လူမျိုးရှိသလို၊ ဂန္ဒီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အယူသည်း အစွန်းရောက်သူလည်း ရှိတယ်။ လက်ရှိ ဒလိုင်းလားမားက လူသားဝါဒအပေါ် သူမတူအောင် ရပ်တည်နေပေမယ့် ၁၆၆၀ ခုနှစ်က ပဉ္စမမြောက် ဒလိုင်းလားမားကတော့ ကျောက်တုံးပေါ် ကြက်ဥတွေ ပစ်ခွဲသလို ကလေးသူငယ်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပစ်ဖုိ့ အမိန့်ပေးခဲ့လေရဲ့။
ခရစ်ယာန်လောကမှာဆိုရင်လည်း ဒေါက်တာ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာ လို လေးစားလောက်ဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိသလို၊ ၁၃ ရာစုနှစ် ပြင်သစ်ပြည်က ပုပ်ရဟန်း ကတော့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း နှစ်သောင်းလောက်ကို လမ်းမှားသူတွေလို့ တံဆိပ်ကပ်ပြီး စုပြုံ သတ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ “သူတို့အားလုံးကို အရှင်မထားနဲ့၊ သတ်ပစ်လိုက်၊ (ဒီလိုလုပ်တာ) ထာဝရ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင် သိလာလိမ့်မယ်”လို့ လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခဲ့တဲ့ အထိပါပဲ။
အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အုပ်စုတွေကို ကျွန်တော် ကြုံဆုံဖူးတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တစ်ယောက်က ဂျာဗားကျွန်းသား မွတ်စ်လင်မ်ပါ။ သူတို့ဟာ စုန်း၊ ကဝေ၊ အောက်လမ်း ပညာရှင်လို့ စွပ်စွဲခံရသူတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီး အဲ့ဒီဦးခေါင်းတွေကို တောင်ကုန်းပေါ် သွားပစ်ထားလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီလို ရက်စက်တတ်တဲ့ စိတ်အခံရှိတဲ့ ကွန်ဂို စစ်ဘုရင်ကြီးကိုလည်း ဆုံဖူးတယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူ (၁၉၀၁ ခုနှစ် အမေရိကန်မှာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ Bible ထဲကအချက်မှန်သမျှ သစ္စာတရားလို့ ခံယူတဲ့ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲ တစ်ခု) Pentecostalism ရဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်လို ပုံဖမ်းထားသူပေါ့။ ဒါပေမယ့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်ကာလ ကျွန်တော့်ကို ညစာစားပွဲဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာ တကယ့် သူတော်စင် ပုံစံအတိုင်း ပြုမူ ဆက်ဆံ တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာကို အကြမ်းဖက်ဘာသာ၊ သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ ဘာသာအဖြစ် ပုံပျက်ပန်းပျက်ရုပ်လုံးဖော်ခြင်းက တော်တော့်ကို လွဲချော်ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသား အုပ်စုတစ်စုဟာ Mukhtar Mai ဆိုတဲ့ မွတ်စ်လင်မ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင့်ကြံခဲ့တယ်။ တရားရုံးအမှုမှာ သူမ အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ သူမဟာ (အဲ့ဒီလူတွေကို သေဒဏ် မတောင်းဆိုဘဲ) လျော်ကြေးငွေကိုသာ အစိုးရဆီက လက်ခံရယူခဲ့ပြီး သူမရဲ့ရွာသူမိန်းကလေးတွေ အတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်လာအောင် မတည်ပေးခဲ့ တယ်။ ပညာရေး ကဏ္ဍအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မာလာလာ မိန်းမရွယ်လေးကို တာလီဘန်တွေက သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီ သေနတ် သမားတွေကလည်း မွတ်စ်လင်မ်တွေပါပဲ။ ကောင်းကျိုးကို သက်စွန့်ဆံဖျား ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ မာလာလာကလည်း မွတ်စ်လင်မ်ပါပဲ။
အီရန်မှာ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဘဟာအီတွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်စ်လင်မ် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mohammad Ali Dadkhah အဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုအပေါ် ရဲရဲတောက် စိန်ခေါ်အာခံခဲ့တယ်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်တစ်ဦးကို လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့တယ်။ ခုအချိန်မှာ သူဟာ ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် ကျခံနေရဆဲပါ။
ပါကစ္စတန်က ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ရှေ့နေကြီး Rashid Rehman ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံသဟဇာတဖြစ်ရေးတွေမှာ အကြီးအကျယ် စွမ်းဆောင်နိုင်သူပါ။ ဒီနှစ်အတွင်း အစွန်းရောက်သူများက သူ့ရုံးခန်းကို ၀င်ဖျက်ပြီး သူ့ကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ လိင်ခွဲခြားမှု၊ သဘောထားသေးသိမ်မှုတွေနဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ – အစ္စလာမ်ကို အကျည်းတန်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ IS ကို ဝေဖန် ရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်၊ မွတ်စ်လင်မ်မှန်သမျှကို အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ မရောထွေးလိုက်ပါနဲ့။ Mukhtar ၊ Malala ၊ Dadkhah နဲ့ Rehman တို့လို သူရဲကောင်းတွေဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍများကို ကိုယ်စားပြုထားတာကိုလည်း ထည့်တွက်စေချင်ပါတယ်။
ကြောက်စရာပုံရိပ်များကိုသာ ဇောင်းပေးဖော်ပြပြီး အစ္စလာမ်ကို တစ်ဖက်သတ် မုန်းတီးရွံကြောက်နေသူများရဲ့ လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး တစ်ယူသန်မှုများကို အားပေးအားမြှောက် မပြုကြပါနဲ့လား။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း သဘောထားကြီးမှု၊ ခေတ်အမြင်ရှိမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်သူများ အပါအ၀င် သန်း ၁၆၀၀ သော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မွတ်စ်လင်မ်တွေ အတွင်း မတူကွဲပြားမှုရှိနေတဲ့ အချက်ကိုလည်း လျစ်လျူမရှုလိုက်ပါနဲ့လား။ အဓိက ကွာခြား ကွဲပြားနေမှုက ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာမဆို သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ တဇောက်ကန်းတွေရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင် ရှင်သန်တဲ့ ယုံကြည် သက်ဝင်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒီအုပ်စုနှစ်ရပ်ရဲ့ အစဉ်အဆက် ကွဲပြားကွာခြားမှု လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဒီလိုအကြောင်းအရာက တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာ ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ အလွန်အင်မတန် မလွယ်ကူလှအောင် ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အမှန် တရားဖြစ်စဉ်ပါပဲခင်ဗျာ။
NewYork Time မှ Nicholas Kristof ရေးသားသော The Diversity of Islam ကို မင်းထွဋ်ခေါင် မှ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုရေးသားသည်။
၂၀၁၅-တွင်ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့်ယာယီသက်သေခံကတ် ကိုင် ဆောင် သူ များ မဲ ပေး ခွင့် မပြု ဟု ဦးတင်အေး ပြော
By burmamuslim on October 21, 2014 | Leaveacomment
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင် သူများကို နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ခွင်၊့ ပါတီဝင်ဖြစ် ခွင့် နှင့် မဲပေး ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ခွင့်၊ ပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်မပြုသည့်အပြင် မဲပေးခွင့်လည်း မပြုတော့ကြောင်း ပြည်ထောင် စုရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ပန်ဒါဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က ပြဋ္ဌာန်းထားသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ အချက်အလက် တချို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ယင်းပြင်တင်ချက်အရ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ထားသူများကို ယခင် ခွင့်ပြုထားသည့် အခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ရှိသူသာလျှင် ပါတီထောင်ခွင့် ရှိတယ်။ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ ပါတီထောင်ထားရင်လည်း အဲဒီလူနေရာလဲနိုင်ဖို့အတွက် အချိန်ပေးရမယ်လို့ ဥပဒေ အရ ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန် နှစ်လ ပေးထား ပါတယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ် ဆိုရင် ပါတီဝင်လို့ ရတယ်။ ပါတီထောင်လို့ ရတယ်”ဟု ပြည်ထောင် စု ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ဆိုသည်။
ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့်ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို မဲပေးခွင့်၊ နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ခွင့်၊ ပါတီဝင် ဖြစ်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းအပေါ် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ပါတီတချို့က ကြိုဆိုလိုက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်း နိုင်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးဇိုးဇမ်က “နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာက အစိုးရ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုတော့ နိုင်ငံ သား တွေကပဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကိစ္စကို တော့ ကျကျနန ရာနှုန်းပြည့် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အနေနဲ့ ကတော့ ဘယ်လိုမှ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီး အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ နေလိမ့်မယ်” ဟု ပြော ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် တနိုင်ငံလုံး ရွေး ကောက် ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ စတင်ပြုစုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းကို အဆင့် သုံးဆင် ခွဲခြား၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆင့်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအထိ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လအထိ လည်းကောင်း၊ တတိယအဆင့်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအထိ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများတွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို မှန်ကန်တရား မျှသော ရွေးကောက် ပွဲဖြစ်နိုင်ရေး ထောက်ပြ အကြံပြုဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင် စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အပြန်အလှန် အမြင်သဘောထားများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သစ်လွင် မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသမီးများ ထိမ်းမြားခြင်း မပြုမီ သတိချပ် စရာ အချက် (၈)ချက်
By burmamuslim on October 17, 2014 | Leaveacomment
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိပဲ ထိမ်းမြားရေး အတွက် အဆောတလျင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကူးပြောင်း ၀င်ရောက်ခြင်းက ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်ဘောင်ဝင်ရောက်ခြင်း သက်သေခံ စကားရပ်ကနေ “ကျွန်မ သဘောတူပါတယ်ရှင့်” လို့ ပြောဆိုတဲ့အထိ အစ္စလာမ်သာသနာကို လက်ခံပြီးကာစ သစ်လွင် မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသမီး များဟာ အစ္စလာမ်သာသနာအကြောင်း လောက်လောက်လားလား မသိရှိမီ မိမိတို့ဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေပါဆိုလို့ ထိမ်းမြားမှု မင်္ဂလာ ပြုလုပ်လိုက်လေ့ရှိကြတယ်။
လူတိုင်းရဲ့ အခြေအနေက မတူညီကြပါဘူး။ အချို့သော သစ်လွင် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတွေဟာ မိမိတို့လက်ခံတဲ့ ယုံကြည်ချက်အသစ်မှာ အားကောင်း သန်စွမ်းလာအောင်၊ လမ်းပြပေးနိုင်အောင် တကယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်းများကို ရှာဖွေကြတယ်။ တချို့ကျပြန်တော့ လက်ထပ် ထိမ်းမြားပြီး များမကြာခင်မှာပဲ မိမိခင်ပွန်းက ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းလေးစားသူ မဟုတ်ကြောင်း ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရပြန်ရော။ တချို့ကလည်း မိမိတို့ စိတ်ကူးထားသလို ဘယ်လိုမှ ပေါင်းဖက် မရနိုင်တာ မြင်သွားတာမျိုး ရှိပြန်ပါတယ်။
ထိမ်းမြားရေးကို စဉ်းစားကြတော့မယ့် သစ်လွင် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီး အဖို့ အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး – မိမိဖြစ်လိုတဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေသေချာချာ သိအောင် ကိုယ်တိုင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဟန်းနီးမွန်း မထွက်ခင် သို့တည်းမဟုတ် သတို့သမီးဝတ်စုံ မဆင်မြန်းခင် သူမအတွက် သတိထား သုံးသပ်အပ်တဲ့ အချက်တွေကတော့ ……………
၁။ ထိမ်းမြားခြင်း ပဋိညာဉ်
အမျိုးသမီးအများအပြားဟာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ကူးပြောင်းလိုက်ပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပဲ သတိ လက်လွတ် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း ပြုလုပ်လိုက်လေ့ရှိကြတယ်။ အစ္စလာမ့်ထိမ်းမြားမှုရဲ့ ပဋိညာဉ်ထဲမှာ ဇနီးလောင်း တစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိဖက်က (တရားနည်းလမ်းကျသော) တောင်းဆိုနိုင်တဲ့အချက်တွေကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အဖြစ် ထည့်သွင်းခွင့် ရှိနေပါတယ်။ ခင်ပွန်းလောင်းက အဲ့ဒီ စည်းကမ်းချက်တွေကို သဘောတူလိုက်နာရပါတယ်။ သဘောမတူဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ ထိမ်းမြားမှု တရားမ၀င်ဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်ထိမ်းမြားခြင်း ပဋိပညာဉ်ဟာ အမျိုးသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးသော ခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းတစ်မျိုးပါပဲ။ မိမိအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို (မတရားတောင်းဆိုမှုမျိုး မဖြစ်စေပဲ) ထည့်သွင်းပြီးမှ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါစေ။
ချစ်ညီအစ်မတွေ တော်တော်များများက ဒီထောင်ချောက် လမ်းကြောင်းထဲ တိုးဝင်မိကြတယ်။ သစ်လွင်မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိရေးမျှ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အမျိုးသားဆီက ထိမ်းမြားရေးကမ်းလှမ်းမှု သို့မဟုတ် မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့မှု ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသားလည်း ရရော၊ တန်းပြီးတော့ ခွာထုတ်တော့တာပါပဲ။ တချို့ဆိုရင် ကလေးတွေ တွဲလောင်း – ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း မယ်မယ်ရရ မရှိ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြ ……..။
ဒါဟာ စိတ် မသက်သာစရာဖြစ်ပေမယ့်လည်း မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပျက်တွေ့မြင်ရတာကြောင့် သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ တစ်နိုင်ငံတည်းသားမဟုတ်သူ မိမိဆီကို ရွှေ့ပြောင်းရောက် လာ အခြေချမယ်ဆိုပြီး တစ်ဦးဦးက ထိမ်းမြားရေး ကမ်းလှမ်းလာပြီဆိုရင် ယုံစားပုံအပ်ဖို့ စိတ်မကူးလိုက်ပါနဲ့ဦး။ တကယ်လို့ ပြည်ဝင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာပင်လျှင် မရရှိသေးသူကို လက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုခဲ့ယင် သူဟာ တကယ့်ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ရရှိသူလား၊ မိမိအပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ ဗီဇာရယူမယ့်သူလားဆိုတာ သူ့အလုပ်ရှင်ကနေတဆင့် သေချာအောင် စိစစ်စုံစမ်းလိုက်ပါ။ ဒါက အကောင်းဆုံး ခံစစ်လမ်းကြောင်းပါပဲ။
နိုင်ငံသားကိစ္စရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်တစ်ခုကတော့ သစ်လွင်မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသမီး အများအပြားဟာ မိမိဇာတိမှာ မနေလိုတဲ့ အမျိုးသားတွေကို လက်ထပ်တာကို တွေ့ရတယ်။ တကယ်လို့ မိမိခင်ပွန်းလောင်းအနေနဲ့ မိမိကို သူ့တိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်သွားစေချင်နေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အဓိကအချက်ကို သိနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ လိုက်လျောညီထွေ နေသွားနိုင် မလား၊ မိမိအတွက် အဆင်ပြေနေတဲ့ အရာတွေကို ထားရစ်ခဲ့နိုင်မလား ?
မိမိဇာတိနယ်ကနေ အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ နေထိုင်ရှင်သန်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါ။ ဒါဟာ ရှေ့ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ အနာဂတ် ရည်မျှော်ချက်
မိမိ ခင်ပွန်းလောင်းဖက်က အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေကို သိနားလည်ထားဖို့က တော်တော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ကျောင်းပြန်တက်ပြီး ဘွဲ့လွန်ယူဖို့ စိတ်ကူးထားသော် လည်း မိမိကို အိမ်ထောင်ရှင်မ အဖြစ်နဲ့သာ သူက ဆန္ဒရှိနေသလား၊ အိမ်တွင်းထဲမှာပဲ နေစေချင်သလား၊ မိမိကို ရှေ့ဆောင်မြှင့်တင်သူဖြစ်လေမလား၊ သို့မဟုတ် ကန့်သတ် တားဆီးမယ့် သူလေလား ? ဒါတွေဟာ စဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ့် မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြေများက မဆင်မခြင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အသည်းကွဲအထီးကျန်မှုကနေ ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကူညီပေးပါ လိမ့် မယ်။
၅။ ခင်ပွန်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိ
မိမိအလေးထားတဲ့ အိမ်မှုကိစ္စ၊ အချစ်ရေး အစရှိတာတွေအပေါ် ဆွေးနွေးပြီဆိုရင် ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့ မျှော်မှန်းထားမှုအပေါ် ချိန်ဆညှိနှိုင်းတတ်ရပါမယ်။ အိမ်တွင်းရေးရာမှာ ဘယ်သူ အဓိကတာဝန်ယူမလဲ၊ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်လား၊ ကလေးရလာတဲ့အခါ သို့မဟုတ် အကောင်ဗလောင်လေးတွေ မွေးကြတဲ့အခါ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရေးမှာ အရင်အတိုင်း ပဲလား အပြောင်းအလဲရှိမလား၊ အပြန်အလှန် ဘယ်လိုမေတ္တာထားနားလည်ဖို့ မျှော်လင့်ထားသလဲ၊ အိမ်ထောင်မကျခင်က လိုက်လျောမှုတွေအတိုင်း ရရှိနိုင်မလား၊ မိမိ လိုလားမှုနဲ့ ဆန္ဒတွေအပေါ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အတွင်းကျကျ ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါ့မလား ?
၆။ ယုံကြည်ချက် ချိန်ခွင်လျှာ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့နှစ်မြို့မှုအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပြုမူသူ မွတ်စ်လင်မ်တွေ အများအပြား ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့က အမည်ခံ မွတ်စ်လင်မ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေ တတ် တယ်လေ။ သစ်လွင် မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိကြဘူး။ ဒါက သိပ်အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ အယူဝါဒသစ်အကြောင်းကို သိနားလည်လာတာနဲ့ အမျှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ သာသနာကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိခြင်းအပေါ် အကြီးအကျယ် မနှစ်မြို့ခြင်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကောင်းရာတိုက်တွန်းတဲ့အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုမဆို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နေ့စဉ်ဆွလာသ်ငါးကြိမ် ၀တ်ပြုသလား၊ ရမ်ဿွာန်လမှာ ဥပုသ်သီလစောင့်ထိန်းသလား၊ ဇကာ့သ်အပါအ၀င် အလှူဒါနပြုလေ့ရှိသလား၊ မိမိနဲ့အတူ (တစ်ချိန်မှာ) ဟဂ်ျခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလား၊ သာသနာ့ရေးရာတွေကို မိမိနဲ့အတူ သင်ပေး/သင်ယူ/လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်သွားလိုသလား စသဖြင့် ခင်ပွန်းလောင်းကို မေးမြန်းထားပါ။
၇။ ယဉ်ကျေးမှု ပြဿနာ
မိမိဝင်ရောက်မယ့် ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာထားပါ။ တကယ်လို့ မိမိနဲ့ယဉ်ကျေးမှု မတူညီသူတစ်ဦးဦးကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားမယ်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှု ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ တချို့ကျတော့ အိုကေ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့မှာတော့ မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်မူဟန်တွေကို ပုံပြောင်းလိုစိတ် မရှိတတ်ဘူးလေ။
မိသားစုတိုင်း မတူကွဲပြားတာ ရှိနေကြပါတယ်။ (ယဉ်ကျေးမှု မတူညီဘူးဆိုရင်) ခင်ပွန်းလောင်းနဲ့ တင်ကြိုဆွေးနွေးပါ။ သူ သို့မဟုတ် သူ့မိသားစုက မိမိကို သူတို့ဓလေ့နောက် လိုက်စေချင်တာမျိုးရှိမရှိ မေးမြန်းဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသားတွေဟာ (အကြောင်းကြောင်းကြောင့်) အမျိုးသမီးလေးဦးအထိ ထိမ်းမြားနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါက မိမိဟာ သဘော မတူပေမယ့်လည်း မယားပြိုင်များ အနက် အပါအ၀င် ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းမှာ ထိမ်းမြားထားပြီးသူ ရှိ/မရှိ၊ အခြားအမျိုးသမီးတွေကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ထိမ်းမြားဖို့ ရည်ရွယ်ထား မထား မေးမြန်းထားရပါမယ်။
တကယ်လို့ သူက အိမ်ထောင်ရှိနှင့်ပြီးသား သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး မိမိအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်မတိုးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ဇနီးသည်လေးဦးထဲ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ အပေါ် လက်ခံနိုင်ရင်တော့ မိမိဆန္ဒအပေါ်သာ မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုသာ လက်ခံတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာဖို့ သဘောတူညီချက် ရယူရပါလိမ့်မယ်။ မယားပြိုင်စနစ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်ခေါင်းစဉ်အောက်က ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်၊ လိုအပ်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့မှီတင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်က ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ့်တာဝန် ရှိပါတယ်။
ယှဟာဒဟ် (အစ္စလာမ်ကို လက်ခံယုံကြည်ကြောင်း သက်သေခံစကား) ပြောကြားသလိုပါပဲ – “ကျွန်မ သဘောတူပါတယ်”လို့ ပြောဆိုခြင်းသည်လည်း ဘ၀အပြောင်း အလဲဖြစ်စေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရွေးချယ်တာ မှန်ကန်ခဲ့ရင် ဘ၀ဟာ ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး သာယာလာပါမယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပွင့်လင်းစွာ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် မှန်ကန်တဲ့ ဘ၀ကြင်ဖော်များ ဖြစ်လာကြပါစေလို့ ………။
Theresa Corbin ၏ 8 essential points new Muslimahs must consider before marriage ဆောင်းပါးကို မင်းထွဋ်ခေါင် မှ ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုရေးသားသည်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လူသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံထားရသည့် မြန်မာနှစ်ဦး အတွက် အမှုမှန် ပေါ်ရေး သမ္မတနှင့် ကာချုပ် တောင်း ဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ စူရတ်ဌာနီခရိုင်အ တွင်းရှိ လိပ်ကျွန်း(ခိုတောင်)တွင် ဗြိ တိန်စုံတွဲနှစ်ဦးအားသတ်ဖြတ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံဖမ်းဆီးခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံ သားနှစ်ဦး၏အမှုကို အမှန် တိုင်းဖြစ် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယုသ်ချန်အိုချာ အား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ က တောင်းဆိုထား ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန် ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်က ထိုင်း နိုင်ငံ၌လူသတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရ သော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး၏ မိသားစု ဝင်များကြြဲ ရုံးခန်းတွင် ရှင်းလင်း ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင် ဝန်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်က အထက် ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
”ဒီအမှုကို အမှန်တိုင်းပေါ်ပေါက် ဖို့အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆောင် ရွက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင်ကလဲ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် ဖို့ဆောင် ရွက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒါတွေ ဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးက အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက် တယ်လို့မြင်တယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး ရခိုင်ဝန် ကြီးက ¤င်း၏အမြင်ကို ယခုလို ပြော ပြသည်။
”သူများနိုင်ငံမှာ မျက်နှာငယ်နဲ့ သွားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ် သားတစ်ယောက်က တိုင်းတစ်ပါးသား နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို ရက်ရက်စက် စက်သတ်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းဒေသမှာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်။ သူများတိုင်းတစ်ပါးမှာသွားပြီးတော့ မျက်နှာငယ် မျက်နှာမွဲ သွားအလုပ်လုပ် ရတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဟာ ဒါထိုင်းနိုင်ငံ သားမဟုတ် ဘူး။ ဥရောပနိုင်ငံသား တစ် ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်မယ်၊ မုဒိမ်းကျင့်မယ်။ အလောင်းကို အိတ်နဲ့ ထည့်ပစ်မယ်ဆိုတာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ် သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝမဖြစ် နိုင်ဘူး”ဟုပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ စူရတ်ဌာနီခရိုင် လိပ် ကျွန်းတွင် ဗြိတိန်စုံတွဲအား မြန်မာနိုင်ငံ သားနှစ်ဦးက သတ်ဖြတ်လိုက်သည်ဟု စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်က ထိုင်းရဲတပ် ဖွဲ့မှစွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးထားလိုက်သည်။ အဆိုပါဖမ်း ဆီးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှု မှန်ပေါ်ပေါက်ရန်အတွက် ရခိုင်ကွန် ရက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်လူမှုပညာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေး ရှင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်း များ၊ မြန် မာနိုင်ငံသံရုံး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှပညာရှင်များ ကလည်း ဖမ်းဆီးခံမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ် ဦးသည် အမှန်တကယ်လူသတ်မှုမကျူး လွန်နိုင်ကြောင်း သတင်းစာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြား ထားသည်။
”ဒီကလေးတွေဖြစ်တဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ တယ်။ အဲဒီနေရာကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထိုင်းရှေ့နေတွေလဲ ပါတယ်။ သူတို့က လဲ ဒီကလေးတွေ လူသတ်မှုကျူးလွန် နိုင်ကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကို ပြောခဲ့ တယ်။ နောက်တစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုမေးတော့လဲ သူ တို့လဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ပြောနိုင်တာကတော့ လူ သတ်မှုမကျူးလွန်ဘူးဆိုတာ အာမခံ ပြောရဲတယ်”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ပညာရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း မှအဖွဲ့ဝင် ဦးထူးချစ်က ပြောသည်။
¤င်းအမှုအား ထိုင်းနိုင်ငံ တရား ရုံးမှ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံခြင်းမရှိ သောကြောင့် ပယ်ချလိုက်ရာ အောက် တိုဘာ ၁၄ရက်တွင် ပြန်လည်ကြားနာ စစ်ဆေးရန်အတွက် အချက်အလက် များကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှတင်ပြခဲ့ပြီး အောက် တိုဘာ ၁၅ရက်တွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကြားနာစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်စဉ်အချိန်တွင် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကလည်း သဝဏ်လွှာပေးပို့ထားပြီးဖြစ် သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့က လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အား တောင်းဆိုထားသည်။
”ဖမ်းဆီးခံမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ထဲမှာ ကိုဝင်းဇော်ထွန်း၏အဖေဖြစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းထိုက်က ဒီကလေးက ငယ် ငယ်လေးကတည်းက ဆော့ရင်တောင် မှ မိန်းကလေးတွေနဲ့ဆော့တာ။ အရက် လဲမသောက်တတ်ဘူး။ အားကစားကို ဝါသနာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသေးသေး လေးက လူအကြီးကြီးကို သတ်နိုင်ဖို့ဆို တာ မလွယ်ကူသလို ဒီကလေး လူမ သတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံတယ်။ ဒီအမှုကို အမှန်တိုင်းပေါ်ပေါက်ဖို့အ တွက် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပေးကြပါ”ဟု ဦးထူးချစ်ကပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ဖမ်းဆီးခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအား သွားရောက် တွေ့ဆုံနိုင်ရန်အတွက် မိသားစုဝင်များ ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် ရခိုင်ကွန်ရက်၊ ထိုင်းအခြေစိုက် လူမှုအ ဖွဲ့အစည်းများနှင့်မြန်မာသံရုံးတို့က စီ စဉ်ထားပြီး အနည်းဆုံးအချိန်တစ်လ အထိနေထိုင်နိုင်ရန် မြန်မာအစိုးရဘက် မှကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထူးအောင်က ပြောသည်။
‪#‎Yangon‬ Times Journal , အတွဲ ၁၀ ၊ အမှတ် ၄၀
‪#‎YangonMediaGroup‬™ | ‪#‎MZK‬ | www.yangonmedia.com
နိုင်ငံတော် သမ္မတ နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ဓာတ်ပုံ – အင်တာနက် )
By burmamuslim on October 13, 2014 | Leaveacomment
By burmamuslim on October 12, 2014 | Leaveacomment
By burmamuslim on October 11, 2014 | Leaveacomment
အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မာလာလာဟာ အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် နှစ်အတော်ကြား ဆောင်ရွက်နေခဲ့ရာက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ် ခံခဲ့ရ တာပါ။ ခေါင်းမှာ ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကို ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အထူးကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။